China Beanie & Knits Mugadziri uye Mutengesi | Wenchang
Nguva yechando Hat mhando: Beanie
Fabirc Feature: Zvakajairika
Nguva yekuendesa: 10-25 mazuva ekushanda
Dhizaini: Yakagadziriswa dhizaini
Rudzi rwebhizinesi: Gadzira
Nguva yekuenzanisira: 3-5days yemaitiro akajairwa
Chinyorwa: 100% Acrylic
Kukura: 58cm kana saizi yakajairwa
Sevhisi: OEM / ODM / Dhizaini
Vanhu vari mubishi kuwedzera majasi makobvu mumajasi avo. Zvino, zvinodziya zvishongedzo hazvifanirwe kuregeredzwa.
Kufanana neheti dzemvere, nguva dzese dzechando vanhu vanotenga Beanie, nekuti musoro wakakosha kwazvo kuti udziirwe. Uye iyo mvere Beanie ngowani fashoni uye inoshanda dhigirii yakanyanya kwazvo.
Musikana mudiki, akapfeka ngowani yepamusoro, munhu wese anoita kunge akareba, mweya wakasimudzwawo zvakanyanya.
Pfeka jasi reruvara rwakakomba panguva dzakajairika, fanisa tsamba yemvere dzakarukwa ngowani, tarisa kuve nesimba vazhinji, zvionekwe zvisina kusimba. Inzwa modelling ingori yakura, pfeka MAO Qiu kapu yemvere, iratidzike yakanaka yakawanda, kudzikisa zera maitiro ekuwedzera cent.
Uye nevasikana vakawanda kwazvo vachidhaya vhudzi ravo mazuva ano, kupfeka ngowani yeKuoko kunogona kukubatsira kuti upfuure nenguva yakaoma apo bvudzi dema rinokura risati rave dhayi. Pachivande taura, anga asina nguva yekugeza bvudzi pamusikana kunze, kupfeka Knit ngowani kunogona zvakare kuvhara chakaipa.
Muchidimbu, nguva yechando inofanirwa kunge iine mashoma lining ganda toni, inogona kuramba ichidziya, fashoni index yakakwira mvere yakarukwa ngowani padivi pemuviri.
Mavara esarudzo dzako
SHANGHAI ALLSOURCING inotungamira yekutengesa uye nyanzvi yekutengesa kunze uye yekupinza zvigadzirwa zveK Knit ngowani, uye zvinovaraidza accessories, Isu tinobatsira vatengi vedu kutsvaga kwefashoni Beanie kuyambuka China yese pano.
Bhizinesi rekambani rakatanga kubva muna2006 nevaviri vaSimon naKaren, vakashanda munzvimbo ino makore gumi neshanu kare.
Allsourcing inogona kupa izere mutsara wefashoni Beanie & Knit, Allsourcing yakasarudzika kugona kwekugadzira uye kududzira mafashoni mafashoni uye zvinhu kune ese emusika maakaunzi uye emitengo mapoinzi anotibvumidza isu kuvandudza kune akasiyana akasiyana vatengi. Iyo kambani ine zvinopfuura mazana mashanu emafekitori anopatsanura Izvi zvinogona kutiita isu kugona kupa kwakanakisa sevhisi kune vatengi vanobva kumativi ese epasi.
Kero: Huguang East Road 89, Minhang Dunhu, Shanghai, China.
Zvadaro: Fedora Hat
Knit Hat Ine Brim
Knit Hat Ine Pom Pom
Knit Hat Ine Ponytail Hole
Dzakarukwa Hats Kune Vacheche
Yakarukwa Santa Hat
Rakarukwa Knitting Hat Kune Vanotanga